युगसम्बाद साप्ताहिक - दुई तिहाईको सरकार गफमै सीमित - विकास खर्च न्यून व्यापार घाटा उच्च
Thursday, 04.09.2020, 11:33pm (GMT+5.5) Home Contact
दुई तिहाईको सरकार गफमै सीमित - विकास खर्च न्यून व्यापार घाटा उच्च
Tuesday, 05.28.2019, 11:19am (GMT+5.5)
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको एकल सरकार पनि विगतका कमजोर र अस्थिर सरकारभन्दा फरक देखिएन । दुई तिहाईको सरकार बनेको झण्डै डेढ वर्षमा मुलुकमा तात्विक रुपमा देखिने विकासका कुनै काम भएका छैनन् । तथ्यांक जस्तोसुकै सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र विकास गर्न सरकार असक्षम रहेको प्रष्टै देखिएको छ । यो सरकारले पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढ्दै जाने तर विकास खर्च हुनै नसक्ने अवस्था अहिले कायम छ । सम्भवतः अबको केही सातापछि दैनिक अबौं रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक हुनेछ ।
दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको हालत किन यस्तो त ? के सरकारमा बस्नेहरु नालायक भएर हो वा कर्मचारीको असहयोग ? प्रश्न दुबै सही छ । अर्थ्विदहरुको भनाइमा कर्मचारीयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको छ । तर, यसको कारण खोज्ने कि नखोज्ने ? काम नगर्नेलाई हटाएर काम गर्नेलाई ल्याउने कि नल्याउने । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरण हुनबाट अब पनि नरोक्ने हो भने देशमा व्यवस्था नै अभिषापको रुपमा स्थापित हुनेछ ।
किनभने १० महिना सुतेर बस्ने सरकार, विकासे निकाय र मन्त्रालयहरु असार लागेपछि विकास खर्चको आधाजसो रकम खर्च गर्छन् । त्यसको नतिजा काम जस्ताको तस्तै बजेट स्वाहा । विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा यो अझै प्रष्ट हुन्छ । आव २०७०।७१मा ४०.६, २०७१।७२ मा ४५.९ प्रतिशत ०७२।७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३।७४ मा ४१.२ प्रतिशत र २०७४।७५ मा ३९.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको थियो ।
विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले व्यापारघाटालाई घटाउनसक्ने कुरै भएन । हरेक वर्ष आयातको हिस्सा बढ्ने र निर्यातको हिस्सा घट्ने क्रम यो वर्ष पनि तीव्र दरमा उकालो लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ११ खर्ब ७८ अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा ७८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु मात्रै निर्यात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९ खर्ब ८२ अर्बको आयात भएको थियो भने ६६ अर्ब ६४ करोडको निर्यात थियो ।
देशको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.८ प्रतिशत छ भने निर्यातको हिस्सा ६.२ प्रतिशत मात्रै छ । आयात निर्यात अनुपात यो वर्ष बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । यसअनुसार नेपालले ९४ रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा मुस्किलले ६ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरिरहेको देखिन्छ । यो अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्बको वैदेशिक कारोबार भएको छ, यो २० प्रतिशतको बढोत्तरी हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा भारतसँग मात्रै ७ खर्ब ११ अर्बको ब्यापार घाटा छ ।
भारतमा ५० अर्बको निर्यात हुँदा ७ खर्ब ६१ अर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । चीनसँग १ खर्ब ६७ अर्बको ब्यापार घाटा देखिन्छ । १ अर्ब ७८ करोडको वस्तु चीन पठाएको नेपालले त्यहाँबाट १ खर्ब ६९ अर्बको आयात गरेको छ । धेरै ब्यापार घाटा हुने मुलुकमा त्यसपछि युएई छ । युएईमा जम्माजम्मी १७ करोडको निर्यात गरेको नेपालले त्यहाँबाट झण्डै २९ अर्ब ८५ करोड अर्बको वस्तु ल्याएको छ । युएईसँग २९ अर्ब ६६ करोडको ब्यापार घाटा देखिन्छ ।फ्रान्सबाट १८ अर्ब ८० करोडको आयात र १ अर्ब ७ करोडको निर्यात हुँदा १७ अर्ब ७३ करोडको ब्यापार घाटा देखिएको छ । यस्तै, इन्डोनेसियासँग १४ अर्ब ६८ करोड, थाइल्यान्डसँग ११ अर्ब ८९ करोड, मलेसियासँग १० अर्ब ६५ करोड र क्यानडासँग १० अर्ब ३४ करोडको ब्यापार घाटा छ ।